Archive du 20180619
Tsy mamadika ny tolona ny depiote Tiako I Madagasikara, izay efa nifanao velirano tamin'ny vahoaka sy ireo sendika. Mijoro hatrany hatramin'ny farany, hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa teny amin’ny Kianjan’ny 13 mey omaly.
Praiminisitra Christian Ntsay Nifampiresaka tamin’ny Amerikana sy ny Sinoa ary ny OIF
Nifandimby noraisin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian teny Mahazoarivo ny mpiandraiki-draharaha Amerikana miasa sy monina eto Madagasikara, Stuart Wilson, ny Solontenan’ny Biraom-paritry ny Fikambanana iraisam-pirenena ho an’ny Frankofonia (OIF) Malik Sarr, ary ny Ambasadaoron’i Sina, Ramatoa Yang Xiaorong.
Olon`ny HVM Ho raikitra ny ampamoaka …
Miseho amin`izay ny tsy fahamatoran`ny antoko HVM eo amin`ny tontolo politika. Araka ny nambara hatrizay dia tsy mahagaga intsony ny tsy fahamatoran`ny antoko HVM satria tsy manam-pototra sady antoko ialokalofan`ireo mpanao afera, ireo mpanao politika mpamadika palitao ary ireo mersenera.
Zanaka ampielezan’i Madagasikara Mangataka an’i Dama hirotsaka ho filoham-pirenena
Nanambara ry zareo avy eo anivon’ny Zanaka ampielezan’i Madagasikara fa olom-pirenena malagasy, miraharaha ny tanindrazana na tsy manana zo hifidy aza ankehitriny.
Samy mandeha..samy mitady
Ny vahoaka moa variana amin'ny tolona. Ny vidin-tsolika anefa toa miakatra eny ihany Ireo mpanao politika sondriana mangorona Ny krizy lalovana toa mihamafy hatrany.
Fiaramanidina kely nidaraboka 5 maty tsy tra-drano
Fiaramanidina kely marika PA31 Navajo mitondra ny laharana 5R-MKF, an'ny kaompaniam-pitaterana tsy miankina Madagascar Trans Air (MTA) no niharam-boina omaly maraina manodidina ny tamin’ny 9 ora sy sasany teny Ampangabe Ambohitrimanjaka, teo amin’ny toerana antsoina hoe “Delta V”.
SECES Antananarivo Handefa taratasy any amin’ny HCC
Tapaka nandritra ny fivoriambe manokan-dry zareo avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo na ny Seces Tana teny Ankatso omaly fa hitory eny amin'ny filankevi-panjakana izy ireo noho ny tsy fahatanterahan'ireo fangatahana notakiany nandritra ny taona maro.
Kaominina Antanetibe Mahazaza Nampivoatra ny fiainan’ny mponina ireo fotodrafitrasa vita
Anisan’ny kaominina iray tena nisedra olana teo aloha teo ny kaominina Antanetibe Mahazaza. Ratsy dia ratsy ny lalana mihazo ny kaominina, antony mahavitsy ireo taksibe miasa any an-toerana.
Taribin’ny Jirama nisy nangalatra Amidy mora 3000 ariary ny kilao
Niaina haizina nandritra ny adiny iray ny vahoaka tao Toamasina ny alahady alina. Tapaka noho izany ny ambiansy ho an’ireo mpitia baolina kitra nanaraka ny lalao nihaonan’i Brésil sy Suisse, noho ny halatra tariby mampitambatra an’i Volobe Toamasina II sy Betainaomby Toamasina I amin’ny herinaratra.
Antsirabe Renivohitra Niaina tao anaty haizina tanteraka
Toerana tsy mba iharan’ny Delestazy ny ao Antsirabe ao. Niaina tanteraka tao anaty haizina anefa ny iray tanàna nanomboka ny alahady 17 jona tamin’ny 11 ora ka hatramin’ny omaly alatsinainy 18 jona tolakandro.
Tournoi Foot Futsal Inter-Direction CUA Raikitra amin’ny alakamisy ny manasa-dalana
Mihetsiketsika fatratra ny tompon’andraikitry ny kolontsaina sy fanatanjahantena eo anivon’ny CUA na Kaominina Antananarivo-Renivohitra(Dcvc) tarihan’ny Taleny, Andrimisa Ramihone Patrick Angelo.
Mondial 2018 Nahazo penalty tamin’ny VAR koa i Suède
Taorian’i Frantsa dia ekipa faha-2 nahazo penalty tamin’ny VAR na « arbitrage vidéo »
Thb Champion’s League Malagasy Hanomboka amin’ny 22 jona ny fifanintsanana
Raha mbola eo amin’ny lalao 1/32-ndalana ankehitriny ny fifaninanana « Telma Coupe de Madagascar 2018 » dia efa nivoaka kosa anketriny ireo ekipa hifanintsana isam-bondrona misy 4 eo amin’ny fiadiana ny
« Valalabemandry ialahy ! Rahoviana ihany vao Valalabemifoha ? », hoy ny hiran’i Zokibe Sareraka, Fanontaniana mbola mitombina tsara io ary miantefa amintsika rehetra.
Fitokonan’ny Lisea Teknika Antsirabe Tsy manaiky lembenana ny mpampianatra
Na dia efa nahazo minisitra vaovao aza ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa dia mbola nanamafy ny fitokonany indray omaly ny mpiasa.
AAA-Tiko Andranomanelatra Efa niala ireo mpitandro ny filaminana
Ny alarobia 13 jona lasa teo no niala tao amin’ny orinasa AAA-Tiko tao Andranomanelatra ireo mpitandro ny filaminana maro nasaina niambina sy nanao sakana tao an-toerana nandritra ny fotoana naharitra.
Vokatra azo avy amin’ny ranomamy sy ranomasina Hitondra fampandrosoana haingana ara-toekarena
Ankoatra ny fambolena sy fiompiana, ny harena an-kibon’ny tany ary ny fizahantany dia tena manankarena haren-dranomasina i Madagasikara.
Minisiteran’ny fambolena sy fiompiana Mitaky ny hialan’ny minisitra ny sendikan’ny mpiasa
Raikitra ny fitokonana faobe eo anivon’ny minisiteran’ny fambolena sy ny fiompiana etsy Anosy.
“Smooth Night” etsy amin’ny Trano Bongo Hampiara-peo i Manoa, Grace Loren ary Elsie
Hotanterahina ny alin’ny 22 jona ho avy izao etsy amin’ny Trano Bongo hotel Tanjombato indray ilay hetsika “Smooth Night” hohafanain’ny orkestra Ivenco.
Tale jeneralin’ny OCEAN TRADE Efa votsotra teo am-pelatanan’ireo mpaka an-keriny
Votsotra tamin’ny alahady tokony ho tamin’ny 10 ora alina teo am-pelatanan’ireo mpaka an-keriny Atoa Mustafa Hiridjee, tale jeneralin’ny orinasa Ocean Trade.
Asan-dahalo tany Alarobia-Bemaha Omby 20 tamin’ny 29 no tafaverina
Nitrangana asan-dahalo indray tany amin’ny kaominina Alarobia-Bemaha ny alin’ny alahady hifoha ny alatsinainy 18 jona 2018, tao amin’ny toerana antsoina hoe Ampasatokana fokontany Ambohijafy, kaominina Bemaha Betafo.
TRA-DOZA MATETIKA NY FIARAMANIDINA KELY
Fiaramanidina kely hatrany no nianjera sy nahafaty olona tao anatin’ny tantaran’ny firenena. Tao anatin’ny roa taona izao dia efa roa no niharan’izany.
Na dia eo aza ny fitokonana etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey etsy Analakely dia tsy adinon-dry zareo avy eo anivon’ny boriborintany voalohany kosa ny fanomanana ny fetim-pirenena.
TSENA 7 LEVON’NY AFO
Nitrangana hain-trano nahatsiravina indray tao amin’ny faritra Antsenakely-Antsirabe ny alin’ny sabotsy 16 jona 2018 lasa teo.
Fampitana mivantana ny « Mondial 2018 » Mila vola be an-jatony miliara ariary
Mianoka ao anatin`ny fiadiana ny amboara eran-tany, taranja baolina kitra “Mondial 2018” tanterahana any Rosia izao tontolo izao ka anisan`izany koa ny Malagasy.